Mitantara indray ny fahoriana sy ny ratran-tsain’ny vahoaka teratany Tamang amin’ny alalan’ny voa nohasinina, taratasy vita tanana · Global Voices teny Malagasy
Niraikitra tao amin'ny kolontsaina sy fombafomba Tamang ilay voa
Voadika ny 24 Septambra 2021 5:17 GMT
Mpanakanto Subas Tamang mampiasa ireo voankazon'i Damocles, heverina ho nohasinin'ny vazimba teratany maro tao Nepal, ho lamba lasitra anaovan-javakanto. Saripikan'i Sanjib Chaudhary.
Voa mangarahara amin'ny hazon'i Damocles (Oroxylum indicum), mifampiraikitra tsara no mandrafitra ny lamba lasitra iasan'i Subas Tamang, mpanakanto Nepaley. Heverina ho madio sy masina ireo voa boribory ireo, fantatra amin'ny hasiny ara-pitsaboana satria voahidy ao anaty boaty miendrika sabatra – lavitry ny fikitihan'ny bibikely. Mitopi-maso amin'ny zavatra mety ho vitan'ny voa hitombo ho lasa hazo, mitantara ny fanavakavahana sy ny fampahoriana nataon'ny Fanjakana — ireo Rana mpitondra raha lazaina manokana — tamin'ny vahoaka teratany Tamang i Subas Tamang.
“Antsoina hoe ko ko mhendo na voninkazo fo amin'ny fiteny Tamang, nitera-boa tamin'ny kolotsaina sy fombafomba Tamang ireto voa ireto,” hoy i Subas, nitafa tamin'ny Global Voices. “Manapaingotra ireo voa ireo amin'ny fanasana alefa amin'ny fotoana manetriketrika ny Tamang. Nanjary marika famantarana ny Tamang izy ireny. ”
Izany no nahatonga an'i Subas nisafidy ny voa nohasinina mba hilaza ny tantara, antsoina hoe Kaiten amin'ny fiteny Tamang. Tantara am-bavan'ny Tamang momba ny fiandohan'ny fiainana, ny kolotsaina ary ny fomban-drazana no atao hoe Kaiten, matetika lazain'ilay zokiolona mpilaza tantara, antsoina hoe Tamba. Tahaka ny ombiasy mampiasa ny voa mba hanasitranana marary, mampiasa azy ireo ho toy ny fomba hanasitranana ny ratran'ny lasa, ny ratran'ny fijaliana sy ny ratran-tsaina ny Subas.
Vakio ihany koa: Andian-javakanto manasongadina ny fanilikilihana ny teratany Tharus any Nepal
Lasa mpibata entana tsotra, mpitatitra amin'ny filanjana, mpitondra hookah sy elo ary mpiasa momba ny tao-trano ny lehilahy Tamang. Toy izany koa ny vehivavy Tamang, miasa ho mpanampy sy mpanampy mpitsabo, no sady mihira, mandihy ary mampiala voly ireo mpitondra.
Pipa I, sangan'asan'i Subas Tamang, mampiseho ny niafaran'ny vahoaka Tamang lasa mpiasan'ny mpiasam-panjakana. Saripikan'i Subas Tamang. Nahazoana alalana.
Voaràra tsy hiditra amin'ny tafika Britanika ny Tamangs . Ny hany laharana ho azy ireo tao amin'ny tafika Nepal dia ny pipa, mpiasa lehilahy ao amin'ny grady ambany indrindra amin'ny tafika. Tsy mba afaka miakatra laharana velively izy ireo. Mampiseho izany amin'ny alàlan'ny sangan'asany Pipa I, mampiseho lehilahy efatra mitondra dokon, harona garaba ao an-damosiny i Subas.
Mampiseho an'i Tularam Tamang antsoina hoe Gole Kaila izay maty natao maritiora tamin'ny taona 1950 tany Biratnagar, tanàna any atsinanan'i Nepal ny hazo vita pirinty sary sokitra ao amin'ny Ko Ko mhendo antsoina hoe Gole Kaila. Na dia maty niady tamin'ny fitondrana Rana aza izy mba hametraka ny demokrasia, dia tsy mba nomena mihitsy ny satan'ny maritiora.
Gole Kaila, Sary sokitra ao amin'ny ko ko mhendo, mampiseho an'i Tularam Tamango izay tsy mba nomena mihitsy ny sata maritiora na dia teo aza ny sorona nataony. Saripikan'i Subas Tamang. Nahazoana alalana.
Fitaovana iray hafa nosafidian'i Subas ho an'ny zava-kantony ny lokta, taratasy asatanana Nepaley, taratasy mitovy ny tamin'ny nampiasain'ny havany avy amin'ny fakon'ny orinasan-taratasy Nepaley ary nentina tao amin'ny lapa ao an-drenivohitra Kathmandu ho asa fanompoana (asa an-terivozona tsy andoavam-bola ho solon'ny hetra). Nahitàna baiko sy lalàna izay nampijaly azy ireo bebe kokoa izany taratasy izany. Saingy namerina indray ny tantaran'ny fahorian'ny vondrom-piarahamoniny tamin'ny alàlan'izany taratasy izany ihany i Subas. Mampiseho lehilahy manao fitafiana nentim-paharazana, saingy ny lohan'izy ireo dia samy misarona fehezam-boninkazo Lokta, ravin-kazo vita taratasy sy amboaram-boankazo manga ny sangan'asany Kagaji Rakam, Kagaji Rakam I sy Baigani Rakam.
Zavakanto Kagaji Rakam, Kagaji Rakam I sy Baigani Rakam mampiseho ny fomba nampiasàna ny Tamangs hanao fanompoana. Saripikan'i Subas Tamang. Nahazoana alalana.
Nilaza i Subas amin'ny fampivelarana ny asany hoe:
“Mba handoavana hetra, dia tsy maintsy miasa maimaim-poana ho an'ny Fanjakana ny Tamangs. Tsy maintsy nanangona hoditra lokta, nanodina azy ireo ho taratasy ary nitondra ireo taratasy ireo eny amin'ny lapa ny Tamangs avy ao Bumtang ao amin'ny distrikan'i Nuwakot. Mila mamokatra ravin-taratasy 200 avy ny tokantrano tsirairay. Toy izany koa, tsy maintsy niasa teny amin'ny tanim-boankazo sy nitondra ny voankazo, indrindra fa ny manga any amin'ny lapa ao Kathmandu ny Tamangs. Tsy maintsy miala ao Kathmandu izy ireo io andro io ihany aorian'ny fitangosana voankazo. “
Vakio ihany koa: ‘Nofy Mifanohitra: Ny Politikan'ny Eo An-toerana’, manentana amin'ny lohahevitra ara-tsosialy any Nepaly ny zavakanto
Tsy mijanona eo ihany i Suba. Amin'ny zavakantony Hami aafno pahichan lekhnnechu (isika no hanoratra ny mari-panondroantsika), andiana solaitra dimy, manao sombina sary sokitra avy amin'ny lahatsoratra misy olana sy fitsarana momba ny Tamang izy, ary avy eo mamafa izany amin'ny taratasim-pasika sy mamela solaitra tsy misy na inona na inona.
Ao amin'ny sanganasany Hami aafai aafno pahichan lekhnechhau, mampiseho ny ranty misy fitsarana manjaka i Subas na dia amin'ny fitaovam-pianarana mifototra amin'ny fandaharam-pianarana ao amin'ny Vaomieran'ny Asam-panjakana aza. Saripikan'i Sanjib Chaudhary. Nahazoana alàlana
“Na ny fitaovam-pianarana voalaza fa mifototra amin'ny fandaharam-pianarana vaovaon'ny Vaomieran'ny Asam-panjakana aza dia mampiseho am-pahadisoana ny Tamangs ho toy ny vahoaka vonona hivarotra ny zanany vavy sy ny vinantovaviny, ary ny tenan'izy ireo koa mba hahazo sakafo matsiro fotsiny,” hoy i Subas. “Te hiteny aho hoe nahoana isika no tokony hiantehitra amin'ny tantara nosoratan'ny hafa. Hanoratra ny tantaranay manokana izahay. ”
Tanterahina ao amin'ny Siddhartha Art Gallery, ny fampirantiana “Kaiten: Tantara, fahatsiarovana, famantarana“, Baber Mahal Nojerena indray tany Kathmandu hatramin'ny 28 septambra 2021